Mpanamboatra Projector - Mpamatsy sy Orinasa mpitrandraka Sina
Ingscreen 1080P Full HD Laser Ultra Short Throw Projector dia mampiasa loharanom-pahazavana laser madio miaraka amina vahaolana 1920 * 1080, mihoatra ny 20000 ora ny fiainana. Ny efijery 80cm dia mila 0.41 metatra fotsiny.
Ingscreen 4K Laser Ultra Short Throw Projector Ho an'ny Teatra An-trano
Ingscreen 4K Laser Ultra Short Throw Projector dia miaraka amin'ny vahaolana 4K UHD teratany, lumens 1500 ansi tena izy, manangana fahatsiarovan-tena Android8.0 3GB RAM 64 GB, wifi, Bluetooth sns fikirakirana avo mba hahazoana antoka fa afaka mahazo traikefa fijerena tsara indrindra ireo mpampiasa. Izy io dia mahatonga ny tranonao sinema tsy miankina sy ambony, toerana tsara ho an'ny fotoam-pianakaviana, miaraka amin'ny teknolojia fandefasana taratra mihetsika, miaro ny maso izany raha ampitahaina amin'ny TV LED jiro mivantana mahazatra. Laser Soure Laser Blue + Phosfor Brightness 1900lm Displ ...
Teknolojia fampisehoana DLP. Vahaolana 1024 * 768 zanatany, tohana faran'izay feno Full HD. Jiro UHP mandritra ny ora 6000 miasa. 30-300 santimetatra haben'ny vinavina. Ny efijery projection haben'ny 80 santimetatra dia mila halavirana 1 metatra fotsiny. Miaraka amin'ny seranana HDMI. Model Model Fanapahana fohy DLP Projector Type Product DLP Projector Product Color White Native Resolution 0.6 ″ XGA, 1024 × 768 DDP2431 Brightness 4000ANSI LM Contrast Ratio 10000: 1 (Full On / Full Off) Aspect Ratio 16: 9/4: 3 Colorsable 16.8 tapitrisa, 24 -...
Fampisehoana tontonana iraisana, Vidin'ny tontonana iraisana, Panel fisaka mifandraika, Vidin'ny fampisehoana tontonana interaktif, Smart Board Interactive Flat Panel, Smart Board Projector,